Ndeupi murairo wekutora iyo IP muLinux? | Linux Vakapindwa muropa
Chii icho raira kuziva IP muLinux? Dzimwe nguva zvinotodiwa ziva yedu IP Kune akawanda kesi, icho chinhu chakanyanya kupusa asi kana iwe usingazive maitiro ekuzviita zvinogona kunge zvichinetsa. Mune angangoita ese masisitimu anoshanda, uchiziva yedu IP iri nyore, ingoshandisa rairo kubva kune iyo terminal uye iwe uchaiwana. MuGNU / Linux haina kunyanya kuomarara uye zvingave zvakakwana kushandisa zvakaenzana neWindows ipconfig, ndiko kuti, iyo ifconfig yekuraira.
Kutanga kutaura izvozvo ifconfig iri rairo rinobatsira kwazvo kwete chete kuziva IP yedu, asi kuita mamwe akawanda mabasa ane chekuita netiweki. Ehe pane dzimwe nzira dzekuziva IP yedu, kunyangwe online sarudzo dzinogona kukubatsira, asi mune ino nyaya tichazviita munharaunda, nekuti isu tine akakodzera maturusi uye zvakanaka kuti isu tinoziva mashandisiro eiyo izere kugona kweLinux distro yedu kuti kazhinji hatishandisi.
Sezvaunoziva, ifconfig chirongwa chinowanikwa paUNIX kumisikidza kana kuratidza parameter enetiweki yemukati Asi kwatiri, isu tichaishandisa kuti tizive IP yemidziyo yedu. Kana iwe uchida kuziva zvimwe iwe unogona kushandisa echinyorwa mapeji (murume) emurairo uko kwese mikana inogona kutsanangurwa. Asi syntax yekutanga ndeinotevera:
Kana isu tikangoshandisa «ifconfig"pasina makotesheni Mune terminal, mhedzisiro yainokupa ichave yakafanana ne:
Ruzivo urwu rwakakosha kwazvo uye tinogona kuona akasiyana paramende, asi muchinyorwa chino isu tinongofarira imwe chete, inova iyo IP. Kuziva yedu IP muLinux, isu tinongofanirwa kuenda kumutsara uko «inet addr»Uye iyo kero iyo inoonekwa nekukurumidza mushure ichave yedu IP. Mune ino kesi IP ichave 192.168.1.2.
Kana iwe usiri kuda kutendeukira kumirairo kuti uwane iyo IP muLinux, tsvaga zvakapusa muGoogle nerunyoro "chii IP yangu" uye iwe unowana mapeji asingaverenge ivo vachakuudza izvo yako yeruzhinji IP iri uye kana iwe uchitarisa neproxy.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Nzira yekuziva yangu IP muLinux
Zvinoita sekunge kuchenjera kujekesa kuti ndiyo yedu IP kero MUNE YEDU NZVIMBO YENYAYA NETWORK yeimwe mudziyo kana network interface.
Ini ndinofunga, nenzira yekuwedzera, kana tichida kuziva yedu IP kero pamusoro peiyo internet (kuburikidza neiyo interface yatinoburitsa nayo), tinovhura iyo terminal hwindo:
(mabheji muwebhu chinongedzo, truncate nzvimbo dzekushandisa)
uyezve kuona yakanzi faira:
Warevesa. Muchinyorwa ini chandinotaura nezve IP yemukati. Pfungwa yakanaka yekuwana iyo yekunze IP. Iyi yekupedzisira ndakaipfuudza nekuti kune mazhinji mafomu evashandisi vakajairika, iyo ini teresa ndiyo yemukati. Semuenzaniso wekubatanidza ssh pane yemuno network, nezvimwe.
Mune kumwe kugovera ifconfig haisisipo uye unofanirwa kuzviita nemirairo «ip» mune fomu «ip addr list»
Walter O. Dari akadaro
Zvakanaka, kuti urege kuenda kune peji kana kurodha pasi chinhu kuti uzive kuti ndeapi yeruzhinji IP yatinayo, unogona kushandisa ...
… Mhinduro inowanzo kutora nguva.
Zviripachena kuti curl inofanirwa kuiswa, kunyange ini ndichifunga kuti mune kumwe kugovera kunovaisa ivo pachavo pamwe neiyo yese "package".
Ichokwadi kuti kazhinji tinofanirwa kuziva IP yemuno, kana isu tichidawo kuona rese network, ine nmap iri nyore:
Tsiva 192.168.0.0 nezvose zvinodikanwa zvinoenderana neyedu network dhizaini.
Pindura kuna Walter O. Dari